Sustainable brands: zvavari, mashandisirwo avanoitwa uye mienzaniso | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 18/05/2022 12:00 | Environment
Indasitiri yemafashoni ndiyo yechipiri indasitiri inosvibisa zvakanyanya pasi rose, uye makambani akawanda uye vanogadzira vari kubheja pakugadzira zvine mutoro. Hapana mubvunzo kuti indasitiri yemafashoni yakachinja kune fashoni inokurumidza mumakore achangopfuura uye haina kumira kukura. Zvose izvi zvakakonzera kugadzirwa kwe Sustainable brands izvo zvinoona kuchengetwa kwezvakatipoteredza uye kudzikiswa kwekukanganisa kwezvakatipoteredza zvavanazvo.
Muchinyorwa chino tichakuudza nezve iwo makuru akasimba mabhureki aripo, maitiro avo uye mabatiro avanoita kuderedza kukanganiswa kwezvakatipoteredza.
1 Sustainable brands
2 Iwo akanakisa akasimba mabhureki
2.5 Iyo Playa & Co.
2.6 Mary Zvakaipa
2.9 masiketi angu
Makumi mashomanana apfuura, zvakanga zvisingabviri kutenga mbatya uye kudzipfeka kekutanga mazuva ose. Mutengo uye kushayikwa kwemaketani makuru, kuve anowanikwa zvakanyanya uye anokwezva kune veruzhinji, akaita kuti tiite sarudzo inofungisisa pakutenga. Pave paine shanduko ye180 degree nekufamba kwenguva. Nepo macheni mahombe emachira ari kutora matanho madiki ekubatsira nekusimudzira uye kugadzira macapsule muunganidzwa, pachine basa rakawanda rinofanira kuitwa.
Rangarira, indasitiri yemafashoni ndiyo yechipiri inonyanya kusvibisa indasitiri mushure meoiri, uye pasi redu harigone kubvumira mabhureki makuru kugadzira zvipfeko nechidimbu pasina kufunga nezvehurefu hwenguva patiri. Nechikonzero ichi, vamwe vagadziri, zvitoro uye stylists vafunga kudzika kuti vashande, nekugadzikana uye kutarisira nharaunda sechiyero.
Kunyange zvazvo mhando dzakawanda dzakagadzikana dzisati dzanyatsozivikanwa, vatengi vavo vari kukura zvishoma nezvishoma uye vari kutanga kuona kukosha kwezvipfeko zvedu kugadzirwa mumamiriro ezvinhu akanaka evashandi nepasi. Zvekuti mamwe mafemu asarudza kugadzira iwo ega miunganidzwa inoenderera.
Pamusoro pekutenga zvipfeko zvinogara mune dzimwe nzvimbo dzatinokurudzira pazasi, unogona kuchengetedza zvakatipoteredza nekuenda zvitoro zvevintage, mashopu ekugadzira kana kuchinjanisa kana kuhaya mbatya mune mamwe maapplication akatobudirira. Hapana mubvunzo kuti kuchengetedza pasi nhasi uye kugara uchifambirana nenguva hazvisi zvinhu zvisingaenderani.
Munyika yedu, kune akawanda uye akawanda mabhureki ane hutsika uye akasimba hunhu hunogadzira zvipfeko zvisiri nyore kushandisa chete, asiwo zvitsva. Isu tinokuratidza mamwe mazano aunogona kugadzirisa wadhiropu yako uchipa pasi zororo.
Iwo akanakisa akasimba mabhureki
Chinhu chinonyanya kukosha kukambani iyi kufunga nezvezvino kusiya nhaka yakanaka yezvizvarwa zvinotevera. Lifegist inotenga Global Organic Textile Standard (GOTS) machira akasimbiswa muEurope, uye Madrid ndiko kunogadzirwa zvipfeko zvese kudzivirira kabhoni tsoka yekutakura.
Ecoalf yakazvimisikidza serimwe remazita anozivikanwa mufashoni yakagadzikana munyika yedu, kunyangwe mhiri kwemiganhu yedu. Mugadziri waro, Javier Goyeneche, aida kuratidza nezvipfeko zvake kuti zvaikwanisika kuramba uine hutano hwakanaka uye kunaka kwakanaka pasina kushandisa zvisizvo zviwanikwa.
Iyi mhando ndeye 100% yakazvipira kune zvakatipoteredza. Zvakanyanya zvokuti shangu dzavo dzose dzakagadzirirwa muBarcelona uye ibasa revashandi vanoshanda mufekitari pedyo neAlicante, iyo inovabvumira kuti varambe vachitarisa mamiriro ekushanda uye unhu hwekugadzira.
Kwenguva ino yekupedzisira, vakatangisa bhutsu yakagadzirwa nenopal kana chibage hura, izvo zvinogara uye vegan zvinhu. Hapana mubvunzo kuti pfungwa nyowani uye itsva ichave yakabudirira.
Femu yekushambira yeCatalan yagadzirira kubudirira sezvo zhizha rinoswedera uye rwendo rwekumahombekombe runosvika. Mugadziri wezvimedu izvi ndiPeque de Fortuny, iyo ine chido chakawanda yakakwanisa kugadzira yakagadzikana yekugezera muunganidzwa, yakabudiswa chete mu studio yayo muBarcelona.
Iyo Playa & Co.
Iyi yekubatana fashoni chirongwa chakagadzirwa naCristina Piña chinoisa tarisiro pane zvakasikwa. Nembatya dzakagadzirwa nezvinhu zvakadzokororwa organic zvine chekuita negungwa, maitiro anoburitsa kudzoka uyezve kupa chikamu chepurofiti kuchirongwa chemagariro, Playa akashandura t-shirt ine mitsetse kuita zvipfeko zvayo zvenyeredzi, gore negore inofemerwa na. akasiyana icons
Kambani yakasiya shure fashoni inokurumidza, inoratidza kuti zvipfeko zvinogona kusimudzira uye kunaka, uku uchichengetedza mitengo inokwanisika uye uchienderana nemaitiro kubva kumhando huru. Pamusoro pezvo, María Malo anoedza, neimwe yedanidziro dzake, kuti vatengi vake vakudziridze pfungwa dzinoziva nezve zvese zvakavatenderedza.
Iyo kambani yasvika chinzvimbo chakasimba muindasitiri yemafashoni. Vagadziri vayo kubva kuAlicante vafunga kuenda nhanho imwe mberi munyika yakagadzikana uye vari kutsvaga nzira nyowani dzekugadzira nekushandisa zvinyoro zvitsva kugadzira kuunganidza kwavo, kunyangwe nekuremekedza kuzere nharaunda.
Kana iwe uri mumwe weavo vanoonga kusarudzika kwechipfeko chimwe nechimwe muwadhiropu yako, izvi pasina mubvunzo zvichava zita rako raunofarira. Chirongwa ichi chinongosanganisira mashoma edition t-shirts akadhonzwa ne12 maartist kubva pasirese.
Zvidimbu zvangu zvese zveSkirts iwo maBhaibheri mashoma akafuridzirwa nemativi akasiyana epasi redu kuremekedza zviwanikwa zvayo uye kodzero dzevanhu vanodzisika.
Iyo Catalan firm yakazvipira kunguva yezvimedu zvayo, ichigadzira zvipfeko zvemhando yepamusoro zvisingambofi zvakabuda kunze. Nezvinhu zvinogara zvakadaro semakushe eshinda nekotoni, machira akadzokororwa uye kugadzirwa kwemuno, zvipfeko zveCUS zvave "zvinofanira kuve nazvo" zvakakosha muwadhiropu yako.
Iyo Ecoology mhando inoshandisa echisikigo, ecological uye akadzokororwa machira nekutarisisa kukuru kune zvakadzama mumagadzirirwo avo, kuve nechokwadi chekuti ivo vanozogara muwadhiropu yako kwemakore mazhinji ari kuuya.
Sezvauri kuona, zvakakosha kupfeka zvipfeko zvinoderedza kukanganisa kwezvakatipoteredza, sezvo iri imwe yeindasitiri inosvibisa nyika uye inopedzwa zvakanyanya zuva nezuva. Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve iwo makuru akasimba mabhureki aripo uye kuti ndeapi mitsara yebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Sustainable brands
Zvakakosha kuti makambani awedzere kuziva kukosha kwekutarisira zvakatipoteredza. Kwandiri, ndiwo makambani makuru anosvibisa uye anokuvadza zvakanyanya pasi redu.
Tose tinofanira kuziva.
Pindura kuna Sumi